अस्ट्रेलियामा फ्लुको महामारी, यस वर्ष मात्रै ४२ जनाले मृत्यु ! « Nepal Bahas
अस्ट्रेलियामा फ्लुको महामारी, यस वर्ष मात्रै ४२ जनाले मृत्यु !
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १२:५८
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा फ्लुका कारण यस वर्ष मात्रै ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश वृद्धवृद्धा छन् ।
ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश क्विन्सल्यान्ड र दक्षिणी अस्ट्रेलियाका छन् । हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार क्विन्सल्यान्डमा २५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने दक्षिण अस्ट्रेलियामा १७ को मृत्यु भएको हो ।
ती मध्ये १३ वृद्धवृद्धा छन् । अस्ट्रेलियामा ६ राज्य र दुई टेरिटोरी छन् । अन्य स्थानको तथ्यांक सार्वजनिक नभइसकेकाले मृतकहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।
दक्षिण अस्ट्रेलियामा फ्लुले मृत्यु हुने वृद्धवृद्धाको संख्या बढेपछि उनीहरू बस्ने नर्सिङ होम अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । प्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत प्रोफेसर प्याडी फिलिप्सले वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म ५३ नर्सिङ होममा रोग पहिचान भएको जनाए । उनका अनुसार १८ नर्सिङ होम अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ ।